Vacheri fekitari - China Vacheri vagadziri, vatengesi
WIK 9085 Chigadzirwa chinotengesa poindi · Iyo yekumba inozivikanwa brand brand ine simba rakasimba uye inosangana nezvinodiwa zvekushanda kushanda. · Iyo chaiyo inowirirana dhizaini uye yepamusoro simba-yekuchengetedza kutonga inoita kuti mushini peturu kushandiswa · Iko kushandiswa kweanotonhora mafeni uye makuru masilencer anoita ruzha rwemuchina kudzikira; · Tora yepamusoro turbocharging tekinoroji kusimudzira kuchinjika kwemuchina kubani; · Iyo yakasarudzika faneli-yakaumbwa fan fan yakavharidzira inowedzera zvakanyanya mweya mweya weiyo th ...
WIK 9070 Chigadzirwa chinotengesa poindi · Iyo yekumba inozivikanwa brand brand ine simba rakasimba uye inosangana nezvinodiwa zvekushanda kushanda. · Iyo chaiyo inowirirana dhizaini uye yepamusoro simba-yekuchengetedza kutonga inoita kuti mushini peturu kushandiswa · Iko kushandiswa kweanotonhora mafeni uye makuru masilencer anoita ruzha rwemuchina kudzikira; · Tora yepamusoro turbocharging tekinoroji kusimudzira kuchinjika kwemuchina kubani; · Iyo yakasarudzika faneli-yakaumbwa fan fan yakavharidzira inowedzera zvakanyanya mweya mweya weiyo th ...
WIK 9088 Chigadzirwa chinotengesa poindi · Iyo yekumba inozivikanwa brand brand ine simba rakasimba uye inosangana nezvinodiwa zvekushanda kushanda. · Iyo chaiyo inowirirana dhizaini uye yepamusoro simba-yekuchengetedza kutonga inoita kuti mushini peturu kushandiswa · Iko kushandiswa kweanotonhora mafeni uye makuru masilencer anoita ruzha rwemuchina kudzikira; · Tora yepamusoro turbocharging tekinoroji kusimudzira kuchinjika kwemuchina kubani; · Iyo yakasarudzika faneli-yakaumbwa fan fan yakavharidzira inowedzera zvakanyanya mweya mweya weiyo th ...